धेरै रोगहरु को लागी एक रामबाण औषधी हो तेजपत्ता, यसरी पाउनुहोस् पत्थरी जस्ता समस्याबाट मुक्ति ! - Sampurnab Khabar
धेरै रोगहरु को लागी एक रामबाण औषधी हो तेजपत्ता, यसरी पाउनुहोस् पत्थरी जस्ता समस्याबाट मुक्ति !
३० पुष २०७८, शुक्रबार by सम्पूर्णव
तेज पत्ता एक आयुर्वेदिक जडीबुटी हो। तेज पत्ताहरु धेरै नेपाली खानाहरुमा प्रयोग गरिन्छ। मसलाको रूपमा प्रयोग गरीने यी तेजपत्ताहरुमा धेरै औषधीय गुणहरु पाईन्छ। तेज पत्तालाई स्वास्थ्यको लागी पनि लाभदायक मानिन्छ र यसलाई खाएर धेरै प्रकारका रोगहरु निको हुन्छन् । तपाइँ प्राय देख्नु भएको छ कि धेरै मानिसहरु लाई पनि तेजपत्ताको चिया पिउन मनपर्छ। गुण को आधारमा, यसको चिया स्वास्थ्यको लागी राम्रो मानिन्छ। यसको चिया वा काढा पिएर शरीर मा लागेका धेरै रोगहरु लाई निको पार्छ । भारतीय भान्सामा प्रयोग हुने मसलाहरु धेरै रोगहरु को लागी एक रामबाणको रूपमा कार्य गर्दछ। भान्सामा राखिएको एक मसला को रूपमा प्रयोग गरीएको तेजपत्ताले सामान्य चिसो देखि लिएर ख’तर’नाक किड्नी र मुटु को रोगहरु सम’स्यलाई नि’मूर्ल पार्नका लागी फाइदाजनक हुन्छ ।
यदि हजुर बा,हजुर आमाहरुले बताइएको उखान टुक्का याद छ भने भान्छा औषधिहरुको भण्डार हो। तेज पत्ताहरुको बारेमा कुरा गर्दा, यो छालाको निखारतालाई बढाउँछ र पनि आफ्नो नाम अनुसार चमक ल्याउँछ । जब अनुहाररको तव्चा राम्रो हुन्छ तब तपाईको अनुहार पनि सुन्दर देखिन्छ । तेजपत्ताको तेलमा धेरै औषधीय गुणहरु हन्छन् जो स्वास्थ्य को लागी धेरै लाभदायक छन्। धेरै प्रकारका मलहम यस तेलबाट बनेका छन् र यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुणहरु छन्। तेज पत्ताहरु तामा, पोटेशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम, सेलेनियम र फलाम भरिएको छ। यो मात्र हैन, यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ जो धेरै रोगहरुमा लाभदायक हुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् जानौँ यसका फाइदाहरु:
टाउको दुखाइबाट आराम मिल्छ: धेरै तनाव लिनाले कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने गर्दछ । टाउको दुखाई को मामलामा, तपाईले तेजपत्ताको काढ़ा बनाउनुहोस् र यसलाई पिउनुहोस् । यो कागती पिएर टाउको दुखाई तुरुन्तै निको हुन्छ। टाउको दुखाई बाहेक, यदि पेट पेट मा दुखाई भएपनि तपाई यसको काढा पिउनुहोस् यसले पेट दुखाई बाट तत्काल राहत मिल्छ।
उल्टीको लागी लाभदायक: मन नरामम्रो हुनु, नराम्रो आभास हुनु, लगातार उल्टी को मामलामा यसले ठूलो लाभ दिन्छ। काढाँ पिउँदा तपाइँको मन एकदम सही हुनेछ। ध्यान दिनुहोस् कि गर्भवती महिलाहरु यसको प्रयोग डाक्टरको रेखदेखमा नै गर्नु पर्छ। गर्भवती महिलाहरु डाक्टर को सल्लाह बिना यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि एक व्यक्ति को पेट दुखाइ को गुनासो छ भने, तब उसले यसको उपयोग गरेर लाभ लिन सक्छ।
रुघाखोकीबाट राहत मिल्छ: चिसो लाग्नु,रुघाखोकी यो सबै भाइरल इन्फेक्सन लक्षण हो । मौसम बदल्नु धुलो धुवामा धेरै गएर बस्नुको कारणले पनि यो समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा, तपाइँ तेजपत्ताको काढ़ाको उपयोगको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। चिसो संगै, यसको काढ़ा हल्का ज्वरोमा राहत प्रदान गर्नको लागी काम गर्दछ।
नसा सुनिने समस्याबाट लाभ: उमेरको चरण अनुसार, अक्सर शरीरमा कमजोरी सग नसा दुख्ने को समस्या शुरू हुन्छ। समय संगै, धेरै मानिसहरु को नसामा दुखाइ पनि शुरू भयो। यस्तो स्थितिमा, तेजपत्ताको को काढ़ाले तपाइँलाई राहत दिन सक्छ। तेजपत्ताको काढ़ा पिएर र यसको तेल प्रयोग गरेर, नसाहरु सुनिने समस्या सही हुन सक्छ, साथै यो रोगबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
पत्थरीको समस्याको लागी फाइदा: अनियमित र दूषित आहार को कारण, पेट मा पत्थरी हुनु आजकल एक सामान्य समस्या भएको छ। यो रोग भएमा, पेट मा धेरै दुखाइ हुन्छ। पत्थरीद्वारा समस्यामा परेका मानिसहरुको लागी, तेज पत्ताका पातहरु धेरै उपयोगी छन्। यसको सेवनले धेरै हदसम्म पत्थरीको समस्या कम हुन्छ। तेजपत्ताका पातहरु उमालेवा खाना मा उपभोग गर्न सकिन्छ।
तेजपत्ताको काढा बनाउने विधी र प्रयोग: काढा बनाउनका लागी तपाईको भान्सामा रहेका केही सामानहरु आवश्यक पर्न सक्छ । तेज पत्तालाई काढा बनाउनका लागी १० ग्राम तेज पत्ता,थोरै अजवाइन, ५ ग्राम सौँफ र चिनीको आवश्यक पर्नसक्छ। यसको साथै तपाई ग्यासमा दुई कप पानी उमाल्नुहोस् बिल्कुल चिया उमाले जस्तै फेरी यस पानीमा अजवाइन र सौँफ राख्नुहोस् । यसपछि यसलाई राम्रो तरिकाले उमाल्नुहोस्, जब सम्म तेजपत्ताले आफ्नो रंग पूर्ण रुपमा छोड्दैन ।
पानी उमाले पछि, चीनी अनुसार स्वाद अनुसार यो थप्न सकिन्छ। यहाँ ध्यान दिन लायक यो छ कि मधुमेह रोगीहरु चीनीको उपयोग गर्नु हुँदैन। यदि सम्भव छ भने, एक सामान्य व्यक्तिले पनि यसलाई थोरै प्रयोग गर्नु पर्छ। जब पानी राम्रो तरिकाले उम्लन्छ र आधा रहन्छ, त्यो हो, एक कप हुनेवाला भएपछि ग्यास बन्द गर्नुहोस् र यसलाई तल झार्नुहोस् । यस पछि, यसलाई सफा छलनी वा सफा कपडा को मद्दतले फिल्टर गर्नुहोस् र एक कपमा राख्नुहोस्। अब तपाइँको काढ़ा उपयोगको लागी बिल्कुल तयार छ। तपाइँ एक दिन दुई पटक यो काढ़ा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो निश्चित रूप बाट तपाइँलाई राहत दिनुहुनेछ।
Posted in ताजा अपडेट, स्वस्थ्य
Prevमाओवादी केन्द्रलाई धक्का, विशाल भट्टराईले गराए यति धेरैलाई एमालेमा प्रवेश
Nextकांग्रेसका यि नेताले आफैलाई किन दिए श्रद्धाञ्जली ?